I-Amazon Yethula Ububanzi Obusha Bamadivayisi Echo | Izindaba zamagajethi
I-Amazon Yethula Ububanzi Obusha Bamadivayisi we-Echo
U-Ignacio Sala | | Izipikha, Amazon
I-Amazon iyinkampani yokuqala ukubheja kuzipikha ezihlakaniphile eminyakeni edlule. Kwakungu-2014 ngenkathi iqala uhambo lwayo kule makethe ngosizo lomsizi we-Amazon: Alexa. Kusukela lapho ubengasalali noma yinini, nokuyikhona okumvumile hlala njengesethenjwa emakethe.
I-Amazon Echo ifana neSpotify ekusakazeni umculo. Kubantu abaningi, azikho izipikha ezihlakaniphile emakethe, kukhona i-Amazon Echo. Abafana abavela eJeff Bezos, izolo bethule ukuvuselelwa kohlu lwe-Echo lwango-2019, ukuvuselelwa lapho sithola khona u-E omushacho, i-Echo Flex, i-Echo Dot enewashi ne-Echo Studio.
I-Amazon iphakamise eminyakeni edlule ukufaka wonke amakhaya emhlabeni futhi ngezinga elithathayo uma ingakakwenzi lokho, ayintuli kancane. Ngoluhlu olusha lwemikhiqizo ye-Echo, i-Amazon isilethele iminikelo emisha yomkhiqizo kanye nokwenza ngcono okuphawulekayo kokuthi i-Alexa isebenza kanjani. Lapha sikukhombisa zonke izindaba ze-2019 i-Amazon yethule futhi seyivele itholakala eSpain.
1 I-Echo entsha
2 I-Echo Flex
3 I-Echo Dot enewashi
4 I-Echo Studio
5 Izici ze-Alexa ezintsha
6 Umndeni wakwa-Echo ufinyelela kwamanye amadivayisi
6.1 Ama-Echo Buds
6.2 I-Echo Loop
6.3 Uhlaka lwe-Echo
I-Echo entsha yisizukulwane sesithathu i-Amazon Echo, isizukulwane sesithathu esihlanganayo izipikha ezintsha ezisezingeni eliphakeme ngobuchwepheshe beDolby futhi lokho kukhiqiza kabusha umsindo ngo-360º. Singayixhumanisa nemodeli yesizukulwane sesi-2 ukuthola umsindo we-stereo, ukucisha umbhobho ngenkinobho ethile futhi itholakala ngemibala emine: i-anthracite, i-indigo, i-grey ekhanyayo nampunga omnyama.
El I-Amazon Echo 3rd Gen ine- Intengo yama-euro angama-99 futhi izongena emakethe ngo-Okthoba 16.
Ukuqala kuma-euro angama-29, i-Echo Flex iba ithuluzi elishibhile elenziwa ukuthi litholakale ku-inthanethi. Le divayisi plugs ngqo esokeni, ngakho-ke ilungele lawo makhona lapho ukuba nezintambo okuxekethile kuyinkinga, njengegumbi lesisekelo, igalaji, amakamelo amancane ...
Ngenxa yobukhulu bayo obuncane, singakubeka kunoma yiliphi ikhona lekhaya lethu ukuze sikwazi ngaso sonke isikhathi, sisebenzisa imiyalo yezwi, ukuphatha amadivayisi axhunyiwe ekhaya lethu, ukwazi izindaba zakamuva ... kodwa futhi inembobo ye-USB ukwazi ukushaja i-smartphone noma enye idivayisi.
El I-Echo Flex nge-Amazon ngizo itholakala kusukela ngoNovemba 14, kepha sesivele sikubekile.
I-Echo Dot enewashi
Isizukulwane sesibili i-Echo Dot siza ne- iwashi elakhelwe ngaphakathi. Le modeli ingomunye wabathengisi abakhulu futhi manje ifaka isikrini se-LED esifanele ukusibeka etafuleni eliseceleni kombhede noma ekhishini lapho kukhonjiswa khona isikhathi. Izinga lokukhanya lizivumelanisa ngokuzenzekelayo nokukhanya okukhona, ngakho-ke akudingeki sikhathazeke ngokuqina kokukhanya uma sihlela ukukusebenzisa ekamelweni lethu lokulala.
Eminye imisebenzi esinikezwa yilesi sizukulwane sesibili ziyefana nezokuqala, ngakho-ke singacela ukushisa kwamanje, izindaba zakamuva, ukuqala umenzi wekhofi, ukucisha i-alamu ... I-Echo Dot ngewashi kuyatholakala ngama-euro angu-69,99 futhi izongena emakethe ngo-Okthoba 16, yize sesivele sikubekile.
I-Echo Studio ingu-rImpendulo ye-Amazon kuyo yomibili i-HomePod ka-Apple kanye namamodeli ahlukahlukene uSonos enza sitholakale kuwo. I-Echo Studio yakhiwe Izikhulumi ezi-5 eziqondisayo yakhelwe ukudala umsindo ocebile, ocacile futhi ongahlelekile. Ngezansi, sithola ichweba elinamandla lokuthi ngenxa ye-133mm woofer yalo inikela ngamandla amakhulu we-330 W.
Ifaka a I-24-bit DAC kanye ne-100 kHz amplifier ibhendi lokudlala umculo ongalahleki okuphezulu. Njenge-HomePod ka-Apple, i-Echo Studio ibona ngokuzenzakalela ama-acoustics esikhala esikuso futhi ilungisa ukudlala komsindo ukuletha umsindo ohamba phambili ngaso sonke isikhathi.
I-Echo Studio isikhulumi sokuqala esihlakaniphile ukwenza Iletha isipiliyoni somsindo esicwiliswa kathathu ngenxa ye-Sony's Dolby Atmos kanye nobuchwepheshe be-360 Reality Audio, okwenza ikulungele ukuvumelanisa nedivayisi eyodwa noma ngaphezulu ku-Fire TV ukukhiqiza umsindo ngomsindo weziteshi eziningi ohambisana ne-Dolby Atmos, i-Dolby Audio 5.1 nefomethi yomsindo we-stereo.
Intengo I-Echo Studio Kungama-euro angama-199 futhi izongena emakethe ngoNovemba 7, yize njengamanye amamodeli, sesingayibekisa.
Izici ze-Alexa ezintsha
Umsizi we-Amazon Echo, i-Alexa, naye uthole imisebenzi emisha ezokwenza lo msizi, abe ngomunye womndeni.
Yazi ukuhleba. Kusukela manje kuqhubeke, lapho sibuza u-Alexa ngezwi eliphansi, uzosiphendula ngezwi elifanayo lezwi, ukuze angavusi umndeni wethu.
Chaza izimpendulo. Impela izikhathi ezingaphezu kwesisodwa, u-Alexa uthathe isenzo noma waphendula ngendlela ebesingayilindele. Ngenxa yokuthuthuka okwenziwe yi-Amazon, sizokwazi ukubuza u-Alexa ukuthi kungani ephendule kanjena, ukuthi yini ayiqondileyo noma kungani ethathe isenzo esithile. Lesi sici sizothuthukisa ukusebenza komsizi womuntu siqu futhi sizotholakala ekupheleni konyaka.
Susa ukuqoshwa kwezwi. Kuleli hlobo, kwaqubuka impikiswano mayelana nokusebenza kwabo BONKE abasizi bezwi, ngoba zonke izinkampani zigcina izingcezu zezingxoxo ukuzihlaziya lapho umsizi engaziqondi. Ngale ndlela, ababekhona bandise izindlela zolwazi lwabo ukuze baqonde ngokushesha ukuxhumana nabasekeli babo. Kusukela ekupheleni konyaka, sizokwazi ukucela i-Alexa ukuthi isuse ukuqoshwa okuzenzakalelayo kokuqoshwa kwezwi nokubhalwa okudala kunezinyanga ezi-3 kuya kweziyi-18 ngokuqhubekayo.
Umndeni wakwa-Echo ufinyelela kwamanye amadivayisi
Ngesikhathi somcimbi, i-Apple ayigcinanga ngokwethula amadivayisi amasha engiwakhulume ngenhla, okuwukuphela kwawo akhona manje eSpain, kodwa futhi yathatha elinye igxathu futhi Inweba ububanzi bamadivayisi aphethwe yi-Alexa anehedisethi engenantambo, iringi, irutha, nezingilazi. Lawa madivayisi njengamanje awanalo usuku lokukhishwa oluhleliwe ngaphandle kwase-United States.
I-Echo Buds ukubheja kwe-Amazon emhlabeni wama-headphone angenantambo aphethwe ngabasizi. Ngokuzimela kwamahora ama-5 necala lokushaja elinikeza amahora amaningi we-20 wokuzimela, baba inketho enhle kakhulu ongayicabangela nokuthi Bancintisana ngqo nama-AirPods akwa-Apple kanye ne-Samsung's Galaxy Buds.
Ngaphezu kwalokho, kukhona iyahambisana noSiri noMsizi weGoogle ngokuthepha enye yamahedfoni ngenkathi i-Alexa icushwa ngemiyalo yezwi. Bane- uhlelo lokukhansela umsindo yakhelwe nguBose futhi ibiza ngentengo ku- $ 129.
Ngenxa yale ring, exhunywe ne-smartphone, singanikeza iziyalezo ku-Alexa ngaphandle kokusebenzisa i-smartphone, kunjalo yenziwe nge-titanium futhi ifaka nesipikha esincane ongaphendula ngayo izicelo zethu noma usithumelele izaziso. Intengo yalezi zibuko ingu- $ 99,99 futhi ingafinyelelwa kuphela ngesimemo
IGoogle Glass bekungumbono omuhle obengenaso isiphetho esihle, ikakhulukazi ngenxa yekhamera eyakhelwe ngaphakathi. I-Echo Framde evela e-Amazon izibuko lokho bafaka imakrofoni esivumela ukuthi sifundise umsizi we-Amazon. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yobuchwepheshe be-Open Ear singalalela izaziso noma umculo wethu esiwuthandayo ngaphandle kokubonwa omunye umuntu.
Intengo yalezi zibuko ingu- $ 179,99 futhi ingatholwa kuphela ngesimemo esifana ne-Echo Loop.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » I-Amazon Yethula Ububanzi Obusha Bamadivayisi we-Echo
ISonos Move, isikhulumi esisha seSonos siya phesheya
Isipikha sebhethri leSonos manje seliyathengiswa: Sonos Move